40 boqolkiiba kansarada Mareykanka ayaa la laxiriira culeyska xad dhaafka ah – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA 40 boqolkiiba kansarada Mareykanka ayaa la laxiriira culeyska xad dhaafka ah
40 boqolkiiba kansarada Mareykanka ayaa la laxiriira culeyska xad dhaafka ah
boqolkiiba 40 boqolkiiba dhammaan kansarada Mareykanka – in ka badan 630,000 oo dhammaantood ah – ayaa lala xiriiriyaa culeys xad-dhaaf ah, saraakiisha caafimaadka ayaa Talaadadii sheegay, in ay ku boorinayaan dib u cusbooneysiinta diiradda ka hortagga.
Waddan boqolkiiba 71 dadka waaweyni ay miisaankoodu culus yahay ama buuran yahay, natiijada ka soo baxday Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Maraykanka ayaa ah “walaac,” ayay tidhi agaasime wakaaladda Brenda Fitzgerald.
“Inta badan dadka Mareykanka ee qaan-gaarka ah ayaa miisaankoodu ka badan yahay tii lagu taliyay – iyo in miisaankoodu culus yahay ama cayillan yihiin dadka waxay halis weyn ugu jiraan dhowr kansar,” ayay ku tiri hadal ay soo saartay.
“Markii aan gaarno oo aan hayno miisaanka caafimaadka leh, dhammaanteen waxaan ka ciyaari karnaa kahortaga kansarka.”
Qaadashada miisaanka xad-dhaafka ah ayaa la soo bandhigay si kor loogu qaado khatarta 13 nooc oo burooyin ah, oo ay ka mid yihiin kansarka hunguriga, qanjirka tayrood, naaska postmenopausal, kaadiheysta, caloosha, beerka, xameetida, kilyaha, ugxan-galka, ilmo-galeenka, xiidanka iyo malawadka.
Heerarka kansarka culeyska badan iyo kuwa buurnida ayaa kor u kacaya, marka la barbar dhigo heerka guud ee kiisaska kansarka cusub ee hoos u dhacay tan iyo 1990-yadii.
Kansarka maqaarku wuxuu ahaa kansarka kaliya ee laxiriira miisaanka oo hoos udhacay 2005-2014 – hoos udhac 23 boqolkiiba, sababtuna waa qayb weyn oo ka mid ah baaritaanka, ayaa lagu sheegay warbixinta.
Dhamaan kansarada kale ee laxiriira culeyska ayaa sare usii kacay boqolkiiba 7 sano gudaheed.
Qiyaastii laba-meelood labo meel 630,000 kansar oo laxiriira cudurka oo lagu ogaadey 2014 waxay ku dhacday dadka da’doodu u dhaxayso 50 ilaa 74.
Haweenka ayaa si gaar ah u nugul, iyadoo 55 boqolkiiba dhammaan kansarada laga helay haweenka la xiriira culeyska, marka la barbar dhigo 24 boqolkiiba kuwa laga helay ragga.
Marka loo eego xogtii ugu dambaysay ee CDC, 32.8 boqolkiiba dadka ku nool Mareykanka ayaa miisaankoodu culus yahay, iyo 37.9 boqolkiiba waa cayil.
xaydha xad dhaafka ah waxaa lagu qeexaa sida lahaanshaha taranka guud ee jirka oo ah 25-29.9 kg / m2, halka cayilka uu ka dhigan yahay BMI ah 30 ama ka kor.
BMI waxaa loo xisaabiyaa iyadoo qaadista culeyska qofka ee kiiloogaraam kiiloo mitir ah oo loo qeybiyay labajibbaaraha dhererka qofka ee mitir.
Previous articleDegdeg:Horn Cable, Astaan iyo True Cable 00 amar la dul dhigey
Next articleMadaxwayne Muuse Biisi Oo La Kulmay Dr Cali Khaliif Galaydh.
Kenya oo si kulul uga jawaabtay Jabuuti
Madaxweyne Farmaajo oo lakulmay dhigiisa Mareykanka Trump